အရောင်တင် ဆိုးဆေး အသုံးပြုသော အစားအစာများ စားသုံးမှုကြောင့် ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုများစေ - Barnyar Barnyar
အရောင်တင် ဆိုးဆေး အသုံးပြုသော အစားအစာများ စားသုံးမှုကြောင့် ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုများစေ
အရောင်တင် ဆိုးဆေး အသုံးပြုသော အစားအစာများ စားသုံးမှုကြောင့် ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုများစေ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပွားခြင်းသည် အရောင်တင် ဆိုးဆေး အသုံးပြုသော အစားအစာများ စားသုံးမှုကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဗအုပ်ခိုင်က ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အရောင်တင် ဆိုးဆေး အသုံးပြု အစားအစာများမှာ မျှစ် ၊ လက်ဖက် အစို ၊ အရောင်တင် ငရုတ် သီးမှုန့် ၊ ရောင်စုံ အအေး မျိုးစုံ ၊ ဂျယ်လီ ( ရောင်စုံ) ၊ တရုတ်မှ လာသည့် မုန့်များ ၊ ပလတ်စတစ် ထုတ်ပိုး အစားအစာများ ၊ ပိုးသတ်ဆေး ဖျန်းထားသော ဟင်းသီး ဟင်းရွက်များကြောင့် အသည်း နှင့် အစာအိမ် ကင်ဆာများ ဖြစ်ပွားရလျက် ရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
” ဒီဆိုးဆေး ပါတဲ့ အစားအသောက်တွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကင်ဆာ ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု နှုန်းက တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ပိုပြီး မြင့်တက် လာတယ် ၊ ကင်ဆာ ရောဂါ လျော့ကျဖို့ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အစားအသောက်ကော ၊ အနေအထိုင်တွေပါ ပြုပြင် သွားဖို့ လိုအပ် ပါတယ် …. ” ဟု ၎င်းက ထပ်မံ ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ၁၀ နှစ်တာ ကာလအတွင်း ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှု နှုန်းသည် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက် လာခဲ့ပြီး အိမ်ထောင်စု ၄ စုတွင် တစ်စုခန့်မှာ ဆိုးဆေးကြောင့် ကင်ဆာ ရောဂါ ဖြစ်ပွားကြောင်း ၊ အချို့မှာ မျိုးရိုးကြောင့်ဟု သိရသည်။
ကင်ဆာ ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု နှုန်းသည် လာမည့် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာ အရ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် မြင့်တက် လာနိုင်ကြောင်း နှင့် WHO၏ အစီရင်ခံစာတွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် အတွင်း ကမ္ဘာ တစ်ဝန်းလုံး၌ လူပေါင်း ၁ ဒသမ ၈ သန်းခန့် ကင်ဆာ ရောဂါ ဖြစ်ပွားပြီး ၅ သိန်းကျော် သေဆုံး ခဲ့ကြောင်း သတင်း ထုတ်ပြန် ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
Credit : သိုက်ရာဇာ
အရောငျတငျ ဆိုးဆေး အသုံးပွုသော အစားအစာမြား စားသုံးမှုကွောငျ့ ကငျဆာရောဂါ ဖွဈပှားမှုမြားစေ
မွနျမာနိုငျငံတှငျ ကငျဆာရောဂါ ဖွဈပှားခွငျးသညျ အရောငျတငျ ဆိုးဆေး အသုံးပွုသော အစားအစာမြား စားသုံးမှုကွောငျ့ ဖွဈသညျဟု မွနျမာနိုငျငံ စားသုံးသူ ကာကှယျရေးအသငျး ဥက်ကဋ်ဌ ဦးဗအုပျခိုငျက ပွောကွားခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါ အရောငျတငျ ဆိုးဆေး အသုံးပွု အစားအစာမြားမှာ မြှဈ ၊ လကျဖကျ အစို ၊ အရောငျတငျ ငရုတျ သီးမှုနျ့ ၊ ရောငျစုံ အအေး မြိုးစုံ ၊ ဂယျြလီ ( ရောငျစုံ) ၊ တရုတျမှ လာသညျ့ မုနျ့မြား ၊ ပလတျစတဈ ထုတျပိုး အစားအစာမြား ၊ ပိုးသတျဆေး ဖနျြးထားသော ဟငျးသီး ဟငျးရှကျမြားကွောငျ့ အသညျး နှငျ့ အစာအိမျ ကငျဆာမြား ဖွဈပှားရလကျြ ရှိကွောငျး ၎င်းငျးက ပွောကွားခဲ့သညျ။
” ဒီဆိုးဆေး ပါတဲ့ အစားအသောကျတှကွေောငျ့ မွနျမာနိုငျငံမှာ ကငျဆာ ရောဂါ ဖွဈပှားမှု နှုနျးက တဈနှဈထကျ တဈနှဈ ပိုပွီး မွငျ့တကျ လာတယျ ၊ ကငျဆာ ရောဂါ လြော့ကဖြို့ အတှကျ မွနျမာနိုငျငံသားတှေ အစားအသောကျကော ၊ အနအေထိုငျတှပေါ ပွုပွငျ သှားဖို့ လိုအပျ ပါတယျ …. ” ဟု ၎င်းငျးက ထပျမံ ပွောကွားခဲ့သညျ။
မွနျမာနိုငျငံ တှငျ ၁၀ နှဈတာ ကာလအတှငျး ကငျဆာ ဖွဈပှားမှု နှုနျးသညျ ၃၀ ရာခိုငျနှုနျး မွငျ့တကျ လာခဲ့ပွီး အိမျထောငျစု ၄ စုတှငျ တဈစုခနျ့မှာ ဆိုးဆေးကွောငျ့ ကငျဆာ ရောဂါ ဖွဈပှားကွောငျး ၊ အခြို့မှာ မြိုးရိုးကွောငျ့ဟု သိရသညျ။
ကငျဆာ ရောဂါ ဖွဈပှားမှု နှုနျးသညျ လာမညျ့ ၂၀၃၀ ပွညျ့နှဈတှငျ တဈကမ်ဘာလုံး အတိုငျးအတာ အရ ၇၅ ရာခိုငျနှုနျးခနျ့ မွငျ့တကျ လာနိုငျကွောငျး နှငျ့ WHO၏ အစီရငျခံစာတှငျ ၂၀၁၂ ခုနှဈ အတှငျး ကမ်ဘာ တဈဝနျးလုံး၌ လူပေါငျး ၁ ဒသမ ၈ သနျးခနျ့ ကငျဆာ ရောဂါ ဖွဈပှားပွီး ၅ သိနျးကြျော သဆေုံး ခဲ့ကွောငျး သတငျး ထုတျပွနျ ခဲ့ကွောငျး သိရှိရသညျ။
Credit : သိုကျရာဇာ
“အျောဂဲနဈ စိုကျပြိုးရေးမှာ အပငျတှေ ပိုးမကအြောငျ ကာကှယျနိုငျသော သဘာဝပိုးသတျဆေးမြား”